EGWUREGWU NA EGWUREGWU: NKE KACHASỊ OKé ỌNỤ N'AKỤKỌ IHE MERE EME - NSOGBU EGWUREGWU - 2019
Isi Nsogbu egwuregwu
Ịzụta nke ahụ adịghị adị: azụmahịa 10 kachasị oké ọnụ n'akụkọ ihe mere eme nke egwuregwu kọmputa
Egwuregwu egwuregwu na-akpali ndị ọrụ maka ogologo oge nke egwuregwu, na asọmpi na-eme ka ha na-azụ nkà ha na-egosi na ha elu karịa ndị ọzọ. Mgbe ụfọdụ, ndị na-egwu egwu na-achọ ọ bụghị nanị na ha ga-abụ ndị kachasị mma, kamakwa iji lee anya na egwuregwu ahụ, nwee ngwá agha pụrụ iche ma ọ bụ ọhụụ onwe onye ọ dịghị onye ọzọ nwere. Maka ọdịnaya dị obere, ụfọdụ ndị dị njikere inye ego dị ukwuu, akụkọ akụkọ nke ụlọ ọrụ egwu egwuregwu ahụ amalarịrị oge ole na ole mgbe ihe egwuregwu na-abanye n'okpuru hammer maka nnukwu ego. Otú ọ dị, ahịa ndị kasị dị oké ọnụ adịghị egosi na ha bara uru mgbe nile.
Team ike mepere emepe Gold Skillet
Zeuzo si World of Warcraft
Nbunye Supercarrier nke sitere na EVE Online
Iweghachi iwe nke Diablo 3
StatTrak M9 Bayonet site na Ntugide-agha: Gaa
Enwere ọkụ ọkụ na-ekpo ọkụ Wardog si Dota 2
Amsterdam si na nke abuo
Dinosaur Egg si Eluigwe na Entropia
Club Neverdie si n'Ebe Ugwu Entropia
Planet Calypso si n'Ebe Ugwu Entropia
Ihe ndị egwuregwu nwere ike ime iji lee anya! N'ihi gizmos na-egbukepụ egbukepụ, ụfọdụ ndị dị njikere itinye aka na ndabara. Ya mere, a na-ere ihe e ji esiji ọla edo site na Ngalaba Egwusiri Ike na Team na 2014 maka ihe dị ka puku dollar ise. Ma, ọ bara uru inye ụdị ego ahụ maka ngwaọrụ kwadoro nke na-apụghị ọbụna ighe ibe ya? Mkpebi obi abụọ, ma onye ahụ zụrụ ya afọ ojuju.
Achịcha ọla - nanị akpụkpọ anụ nke na-enweghị uru ọ bụla ọzọ
MMORPG na-ewu ewu nke ụwa nke Warcraft na-eti ndị nwere egwuregwu na ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ na nkà na ụzụ. A na-ere Zeuzo bụ dike, bụ onye ji narị awa isii na-arụ ọrụ ugbo na-adịghị akwụsị, maka puku dollar 10. Eziokwu, na Blizzard ụdị ahịa a anabataghị, n'oge na-adịghị anya, egbochiri àgwà ahụ, na onye na-azụ ya, bụ onye na-agụghị usoro nke nkwekọrịta onye ọrụ ahụ, hapụrụ ya.
Iji mepụta dike dị elu dị elu, ọ dị gị mkpa itinye oge dị oke egwu na Grind
Ọfụma ụgbọelu Supercarrier nke na-enweta ụgbọelu na EVE Online na-arụ ọrụ dịka nnukwu ike ikpo ọkụ kpakpando na ọtụtụ ndị na-egwu egwu. N'eziokwu, ugbu a, egbe a nke metal metal dị na-edina n'elu nkwụsịtụ intergalactic. N'afọ 2007, otu n'ime ndị egwuregwu ahụ zụtara ụgbọ ahụ maka puku dolla 10,000, ma ọ tụfuru ya, na-ebu ya site n'otu mpaghara gaa na nke ọzọ.
Onye na-achọta ihe ọjọọ, bụ onye ji ego na-eme ihe ọhụụ, ka nọ na-ama jijiji nke ihe merenụ, ma eleghị anya, ọ ga-ebibi ihe nile ọbụla aka, na-ewe iwe.
Ndị omekome Sly, bụ ndị mụtara banyere ụzọ ahụ site na onye nledo ha, gbachiri ngwa ngwa a na-ejikọta ọnụ
A na-ere otu n'ime akụrụngwa ndị kasị dị egwu na diablo 3 maka ego ruru puku dolla 14. Ihe a dabara na enweghi ihe puru ime, ndi nwe ya nwere obi uto ekwenyegh i ime ego n'inwe ihe. Ịzụta ihe onye ọkpụkpọ na-eji edozi ego.
Ugbu a iji mee ụdị azụmahịa ahụ agaghị aga nke ọma. Blizzard anaghị anabata mgbanwe n'etiti ndị na-eji ezigbo ego.
"Iweghachi nke ọnụma" aghọwo ngwá agha dị oké ọnụ n'akụkọ ihe mere eme nke egwuregwu Diablo 3
N'afọ 2015, ahia kachasị elu mere na akụkọ banyere CS: Gaa. A na-ere akwụkwọ mara mma nke StatTrak M9 Bayonet mma ka o jiri ya ree ya maka $ 23,850. N'oge ahụ n'egwuregwu ahụ, e nwere nanị otu akwụkwọ nke ngwá agha a na-egbu egbu.
Onye ire ere ahụ kwuru na maka akpụkpọ mma ọ na-enye ọ bụghị naanị inyefe ego, kama ọ na-enyekwa ya mgbanwe maka ụgbọala na ezigbo ala.
Site na ahịa ahịa Steam e rere ihe kacha dị oké ọnụ n'akụkọ ihe mere eme nke egwuregwu Dota 2. Ha ghọrọ akpụkpọ anụ maka onye ozi ahụ. Ụfọdụ ndị na-ede akwụkwọ na-akpọ ndị Wardog ọkụ na mberede. A rụpụtara mmetụta pụrụ iche nke mmetụta maka ụyọkọ ahụhụ, Otú ọ dị, ndị gamers nwere mmasị na ngwọta a. Afọ isii gara aga, a zụtara àgwà a na-emeghị ihe ọjọọ maka ihe dị ka puku dolla 34.
Na mkpokọta, e nwere 5 ndị ​​ozi dị otú ahụ na egwuregwu, ha anaghị efu ihe karịrị $ 4,000
Ọrụ nke abụọ na-arụ ọrụ n'Ịntanet na-eme ka aha ya doo anya, na-enye ndị na-eme egwuregwu aka ịme onwe ha n'ime ụwa ọhụrụ zuru oke, nke ga-aghọ ihe ọzọ dị na eziokwu. N'ebe a, dika ezigbo ndụ, ị nwere ike ịzụta ihe, ịzụta uwe, ụlọ na ụgbọala. N'otu oge, a na erere obodo ahụ maka puku dollar 50. Ụdị Amsterdam nke ọma, dịka nke mbụ, bụ ego kachasị ọnụ n'akụkọ ihe mere eme nke Second Life.
Ogologo ya nwere na ndị obodo nke obodo ahụ na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na-akwalite obodo ahụ iji kwalite ozi ọma.
O yikarịrị ka onye ahụ zụrụ ya bụ ezigbo onye isi obodo Dutch.
Egwuregwu Eluigwe Na-arụ Ọrụ adịghị akwụsị iju anya. Ndị na-egwu egwu ebe a na-azụta ọ bụghị naanị ezigbo ala, kamakwa ihe ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, otu n'ime ndị na-egwu egwuregwu zụtara dollar 70,000 na àkwá dinosau dị iche iche, nke o weere na ọ bụ naanị ihe mara mma. Ọ bụ ihe ijuanya na, mgbe afọ abụọ gachara, ọ dị nnukwu nnukwu anụ ọhịa nke si n'akpaahịa ahụ, bụ nke onye na-azụ ahịa ọjọọ na ndị egwuregwu ndị ọzọ ga-alụ ọgụ.
Azụ akwa dinosau dị na egwuregwu ahụ kemgbe ọ malitere, ọtụtụ akụkọ na akụkọ ntụrụndụ na-agbasakwa gburugburu ya.
Mmiri Eluigwe nke MMO bụ otu n'ime ọrụ ndị kasị dị egwu nke ụlọ ọrụ ịgba egwu nke oge a, ebe ezigbo ahịa na-eme nke ọma. Ndị na-egwu egwu dị njikere itinye ego siri ike ileta ihe onwunwe mmadụ, nke gụnyere ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ụlọ ahịa, ebe ntụrụndụ na mbara ala dum. Onye na-egwu egwuregwu John Jacobs zụtara onye na-agụ kpakpando ka o wee ghọọ ụlọ ntụrụndụ nke ụwa. Ka oge na-aga, onye ahịa nwere ike ire ahịa maka ezigbo puku dollar 635.
Gamer zụtara otu kpakpando na 2005 maka $ 100,000
Otú ọ dị, ọbụna òtù John Jacobs enweghị ike ịsọ mpi na ahịa dị egwu nke dabara na Guinness Book of Records. Otu ndị na-anụ ọkụ n'obi nke SEE Virtual Worlds zụtara ala Calypso ụwa site na ndị mmepe egwuregwu maka ego efu nke $ 6 nde.
Ndị na - azụ ahịa na - enwe obi ụtọ na - achịkwa ụwa, ma ụwa dum na - egwu egwu, mana amaghị ama ma ego ha kwụrụ.
Egwuregwu Egwuregwu na ahia n'etiti egwuregwu bụ akụkụ dị mkpa nke egwuregwu egwuregwu. Kwa afọ, ihe ọhụụ ọhụrụ na - enweta ezigbo uru. Ònye maara, ma eleghị anya, Entropia Universe records ga-agbaji ma ọ bụrụ na egwuregwu na-anọgide na-azụta ọla, relics, ngwá agha akụkọ ihe mere eme na ụwa dum na otu ịnụ ọkụ n'obi.
Tinye ụda na TV site na HDMI
Gbanye akwukwo njehie mfc100.dll
Ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka smartphone Xiaomi Redmi 3
Ihe mere na òké ahụ anaghị ewe akwụkwọ (kọmputa) site na ọnọdụ njikere
Anyị jikọtara ụlọ ihe nkiri ụlọ na PC
Netwọk mmekọrịta dị mma VKontakte jupụtara n'ọtụtụ ọdịnaya. Akwụkwọ ndị mmadụ na ndị otu na-akwalite ntụrụndụ ntụrụndụ na-adọrọ mmasị na mgbasa ozi, na-enweta ọtụtụ iri nde echiche kwa ụbọchị. Ma ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị hụrụ ọkwa dị egwu ma ọ bụ na-adọrọ mmasị n'ihu ọha, mana ndị enyi gị ahụbeghị ya? GụKwuo
Tinye otu kọlụm na tebụl na Microsoft Okwu
Wepu sel na Microsoft Excel
https://termotools.com ig.termotools.com © Nsogbu egwuregwu 2019